iWatermark Pro ye-Mac -Khusela kwaye ukhusele iifoto zakho | Plum emangalisayo
IWatermark Pro ye-Mac-Khusela kwaye ukhusele iiFoto zakho
UMHLA: ngoJuni 20, 2011
iWatermark Pro yinguqulelo yamva nje yeWatermark yeMac. I-iWatermark yehlabathi akukho. 1 isicelo se-watermarking se-Mac, Windows, i-iPhone / i-iPad kwaye kungekudala i-Android. I-Stylisily yelungelo lokushicilela yonke imifanekiso yakho kunye nekhabhathi ebonakalayo ngaphakathi kwemizuzu. I-iWatermark ikuvumela ukuba wongeze i-watermark yakho okanye ishishini kuyo nayiphi na ifoto okanye imizobo. Nje ukuba ifakwe kwifoto le watermark ebonakalayo ibonisa indalo kunye nobunini bakho. Ukujonga ukubonwa kubaluleke kakhulu kwaye njengokutyikitya igama lakho kuxwebhu, ukubonisa ngokufihlakeleyo, nokuba yeyiphi ifoto yakho, yeyakho, kwaye ingasetyenziswa ngaphandle kwemvume yakho. I-iWatermark Pro sisixhobo esifanelekileyo sabathwebuli kunye nakubani na ngekhamera yedijithali, iingcali okanye abaqalayo.
iWatermark Pro ye-Mac. Khuphela apha.
Ukuze ufunde ngakumbi yiya kwindawo yeWatermark:
Iyafumaneka ngoku ukuthenga kwiPlum emangalisayo Ivenkile:
I-iWatermark sisixhobo esikhethekileyo kwimifanekiso ye-watermark. Ixabiso eliphantsi, elisebenza ngakumbi, elikhawulezayo nelilula kakhulu ukusebenzisa iFotoShop. I-iWatermark yenzelwe ngokukodwa ukubonwa kwemifanekiso ngumenzi weefoto.
IWatermark Pro kukuphinda ubhale kwaye uphuculo olukhulu kwiWatermark yasePlum Amazing. Iphinde yabhalwa ngokutsha kusetyenziswa iitekhnoloji zakutshanje zika-Apple. Uluhlu lomahluko phakathi kweWatermark kunye neWatermark Pro lukwincwadi ye-intanethi apha.
I-watermark inokuba sisicatshulwa, umzobo, okanye ibhakhowudi (ikhowudi ye-QR). Xa usenza i-watermark unokuhlengahlengisa ngokulula isikali sayo, i-opacity, ifonti, umbala, ikona kunye nezinye izinto ezininzi. Gcina okanye ukongeza imethadatha elandelayo nge-IPTC okanye kwifomathi yeXMP ye-Adobe. Qamba kwakhona, phinda wenze ubungakanani kwakhona, ucofe kwaye wenze iithonjana. Khetha ngokulula enye yakho okanye enye yeemithombo zokubukela eziqhelekileyo kwimenyu kunye ne-watermark 1 okanye amawaka eefoto ngexesha. Ukulungiswa kweqela kunye ne-iWatermark Pro kuyakhawuleza kuba isebenzisa inkqubo ehambelanayo yokusebenzisa ii-cpu ezininzi kunye / okanye i-gpu's. Ukungenisa / ukuthumela ngaphandle kunye nokwabelana ngeewermark kunye noogxa bakho, usapho okanye abahlobo.
Ngomhlaba osayiniweyo umsebenzi wakho / iifoto / imizobo / ubugcisa kunye neWatermark, buyisela impahla yakho yobungcali kwaye ugcine ukuqondwa okufaneleyo.
I-iWatermark Pro yeMac yinqanaba lesoftware enobuchule bokujonga iifoto kunye nezinye iigraphics. Yeyona ndlela ilungileyo yokutyikitya umsebenzi wakho wobugcisa kwaye uyamkelwe njengepropathi yakho yokuqonda. iWatermark Pro ye-Mac ilula kwaye isebenza kwiWindows, iPhone kunye ne-iPad nayo.
IPlum emangalisayo yinkampani yabucala enikezelwe ngasese kwi-iPhone, Mac, Windows kunye neeapps zikaGoogle. IPlum emangalisayo ngumboneleli wehlabathi wezicelo zeselfowuni kunye needesktop ukusukela ngo-1995. Bakwangabenzi bezi nkqubo zokusebenza:
Ye-iPhone / iPad
Isithethi, Iindleko, IPhuli yeGalactic
Uhlobo, iWatermark, CopyPaste, iClock, iKey, KnowledgeMiner
Amagcisa eendaba ngolwazi oluthe kratya kunye nekopi yokuphononongwa kwengcaciso kuyo nayiphi na isoftware yethu, nceda unxibelelane nathi.